एमालेको पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति (सहमतिको बूँदासहित)
July 11, 2021 N88LeaveaComment on एमालेको पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति (सहमतिको बूँदासहित)
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमति भएको छ । आइतवार सिंहदबारमा बसेको बैठकले १३ घण्टापछि सहमति जुटाएको हो । राति १० बजे सकिएको कार्यदल बैठकले गरेका १० बुँदे सहमतिमा ६ वटा खनाल–नेपाल पक्षको बूँदा रहेको बताइएको छ । यद्यपि यो सहमति कार्यदलस्तरको मात्रै हो । कार्यदलका सदस्यहरुले सोमवार बिहान सहमतिपत्र अध्यक्ष […]
जनता समाजवादी पार्टी खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट
July 11, 2021 N88LeaveaComment on जनता समाजवादी पार्टी खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट
काठमाडाैं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकीकरण बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। १० वैशाख २०७७ मा राष्टिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर जसपा बन्दा संविधान र अन्य प्रचलित कानूनी प्रावधान पूरा नगरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। रिट राजपाका तत्कालीन उपाध्यक्ष राजकुमार थापाको तर्फबाट हृदयराज […]
July 11, 2021 N88LeaveaComment on रियलमी ७ र सी १२ को मूल्य घट्यो
काठमाडौं। रियलमी ७ र सी १२ को मूल्य घटेको छ । संसारमा तीव्र गतिमा बजार विस्तार गरिरहेको रियलमीले आजदेखि नेपालमा रियलमी ७ र सी १२ दुईवटा ब्राण्डको मूल्य घटाएको हो । चुनौतीदेखि उन्नतिसम्म नारासहितको ब्राण्डको विश्वास र उन्नत प्रविधिको लोकप्रियताका साथ रियलमी ७ ले अगाडि बढिरहेको रियलमीले अग्रगामी प्रदर्शनी, क्षमतावान क्यामेरा र अल्ट्रास्मूथ डिस्प्लेका साथ […]
निर्वाचन आयोगले भन्यो : नेकपा (माओवादी केन्द्र) वैधानिक, बादल–टोपबहादुरहरुको निवेदन खारेज
July 11, 2021 N88LeaveaComment on निर्वाचन आयोगले भन्यो : नेकपा (माओवादी केन्द्र) वैधानिक, बादल–टोपबहादुरहरुको निवेदन खारेज
काठमाडाैं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) विघटन गर्नुपर्ने माग गरी दर्ता भएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ। माओवादी केन्द्रविरुद्ध परेको निवेदनमाथि आइतबार निर्वाचन आयोगले छानबिन गरेको हो। माओवादी विघटन गर्नुपर्ने माग गरी दर्ता भएको निवेदन खारेज गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए। “माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको आयोगले ठहर गरेको छ। यसविरुद्ध परेको निवेदन खारेज भएको […]
प्रधानमन्त्री बन्न बाटाे खाेज्दै बामदेव गाैतम, राष्ट्रियसभामा राखे यस्ताे माग
July 11, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री बन्न बाटाे खाेज्दै बामदेव गाैतम, राष्ट्रियसभामा राखे यस्ताे माग
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले)का सांसद वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभाका सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। संविधानमा प्रतिनिधि सभा सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ। “राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुस्,” राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकमा बोल्दै गौतमले भने, “विभेद त्यतिवेला हट्छ, जतिवेला राष्ट्रिय सभाका सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछन्।” […]
सर्वोच्च अदालतबाट भोलि यस्तो फैसला आउँदै ….
July 11, 2021 N88LeaveaComment on सर्वोच्च अदालतबाट भोलि यस्तो फैसला आउँदै ….
काठमाडौं । यतिबेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ छ । भोलि २८ असार सोमबार सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दैछ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दायर रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तिम किनारा लगाउने तय भइसकेको छ । त्यसबमोजिम सर्वोच्चमा सबै तयारी भइरहेको छ । भोलिको सर्वोच्चको फैसलाले देशको राजनीतिलाई दुरगामी असर पार्न सक्छ […]
‘परिवारले नै ह’त्या गरी’ सेफ्टी टैंकीमुनी गा’डेको भेटियो सुजिताको शव
July 11, 2021 N88LeaveaComment on ‘परिवारले नै ह’त्या गरी’ सेफ्टी टैंकीमुनी गा’डेको भेटियो सुजिताको शव
जनकपुर । ४८ दिनदेखि वेप’त्ता सुजिता ठाकुरको श’व भेटिएको छ । उनको योजनावद्ध तरिकाले ह’ त्या गरी गाडिएको अवस्थामा श ‘व आज विहान फेला परेको हो । ह’ त्यामा परिवारका सदस्य नै संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि गा’ डिएको स्थान पनि पत्ता लागेको प्रहरीले जनाएको छ । गाडिएको जमिनमा काठका मुढाहरु राखिएको र गहिरो सेफ्टी ट्यांकी […]
सभापतिको एकल उम्मेदवार बनेपछि गगनले के भने ?
July 11, 2021 N88LeaveaComment on सभापतिको एकल उम्मेदवार बनेपछि गगनले के भने ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औं महाधिवेशनमा कोइराला परिवारभित्र सभापतिमा सहमतिमै एक जनाले उम्मेद्धवार दिनेबारे छलफल भएको छ । शेखर कोइरालाले यसबारे छलफल अघि बढाएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले यसपटक आफू सभापतिमा उठ्ने तयारी गरेको भन्दै सघाउनको लागि शशांक र सुजाता कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए । कतिसम्म भने आफूलाई साथ नदिएपनि अब पछि नहट्ने […]
एमालेमा मिलेन कुरा : कि अध्यक्ष रहनुस् कि प्रधानमन्त्री रहनुस् भन्दा ओलीले भने ‘नो’
July 11, 2021 N88LeaveaComment on एमालेमा मिलेन कुरा : कि अध्यक्ष रहनुस् कि प्रधानमन्त्री रहनुस् भन्दा ओलीले भने ‘नो’
काठमाडाैं । नक्सालस्थित एक होटेलमा भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ट नेता माधवकुमार नेपालबीच कुरा मिल्न सकेन । बुधवार साँझ भएको भेटवार्तामा कुरा नमिलेको स्रोतले जानकारी दियो ।नेता नेपालले या त प्रधानमन्त्री रहनू या त पार्टी अध्यक्ष रहनू भनेर गरेको प्रस्तावमा ओलीले ‘नो’ भनेको स्रोतको दाबी छ । ओलीकै […]
माधव नेपालले विधानमै नभएको पद लिन खोज्दा भयो यस्तो लफडा !
July 11, 2021 July 11, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालले विधानमै नभएको पद लिन खोज्दा भयो यस्तो लफडा !
काठमाडौं । एमालेको आन्तरिक एकता कायम गर्न गठित वार्ता टोलीले तयार पारेको मस्यौदाप्रति बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमति जनाउनु भएको छ । आफू पक्षधर ५ वार्ता टोली सदस्यहरुलाई आज विहान निवासमै बोलाएर नेपालले मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो । कार्यदलका एक सदस्यले जनताटाइम्सलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार नेता नेपालले केपी ओली एकल अध्यक्ष कायम रहने गरी […]